Translations < Myanmar (Burmese) < 4.1.x < GlotPress — WordPress
Translation of 4.1.x: Myanmar (Burmese)
Filter ↓ • Sort ↓ • All (1,596) • Untranslated (3) • Waiting (4) • Fuzzy (0) • Warnings (0)
The query does not contain the correct number of placeholders (%1$d) for the number of arguments passed (%2$d). မေးမြန်မှုတွင် အတည်ပြုခဲ့သော ငြင်းခုံမှု အရေအတွက် (%2$d) အတွက် မှန်ကန်သည့် Placeholder အရေအတွက် (%1$d) မပါရှိပါ။	 Details
မေးမြန်မှုတွင် အတည်ပြုခဲ့သော ငြင်းခုံမှု အရေအတွက် (%2$d) အတွက် မှန်ကန်သည့် Placeholder အရေအတွက် (%1$d) မပါရှိပါ။
2018-05-23 07:44:11 GMT
The query does not contain the correct number of placeholders (%1$d) for the number of arguments passed (%2$d). မေးမြန်းမှုတွင် အတည်ပြုခဲ့သော ငြင်းခုံမှု အရေအတွက် (%2$d) အတွက် မှန်ကန်သည့် Placeholder အရေအတွက် (%1$d) မပါရှိပါ။	 Details
မေးမြန်းမှုတွင် အတည်ပြုခဲ့သော ငြင်းခုံမှု အရေအတွက် (%2$d) အတွက် မှန်ကန်သည့် Placeholder အရေအတွက် (%1$d) မပါရှိပါ။
2018-05-23 07:44:37 GMT
The query only expected one placeholder, but an array of multiple placeholders was sent. မေးမြန်းမှုသည် Placeholder တစ်ခုကိုသာ မျှော်မှန်းထားသော်လည်း တစ်ခုထက်ပိုသော Placeholder များ၏ Array အား ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။	 Details
မေးမြန်းမှုသည် Placeholder တစ်ခုကိုသာ မျှော်မှန်းထားသော်လည်း တစ်ခုထက်ပိုသော Placeholder များ၏ Array အား ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
2018-05-23 07:46:09 GMT
Unsupported value type (%s). ပံ့ပိုးလုပ်ဆောင်နိုင်မှု မရှိသော တန်ဖိုး အမျိုးအစား (%s)။	 Details
ပံ့ပိုးလုပ်ဆောင်နိုင်မှု မရှိသော တန်ဖိုး အမျိုးအစား (%s)။
2018-05-23 07:46:48 GMT